I-LOFT Ethokomele e-Bajo CENTRICO IPAKILE I-WIFI YAMAHHALA - I-Airbnb
I-LOFT Ethokomele e-Bajo CENTRICO IPAKILE I-WIFI YAMAHHALA
Córdoba, Andalucía, i-Spain
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Manu
U-Manu Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elisezingeni eliphansi nelithokomele, elilungiswe ngokuphelele futhi lilisha, emphakathini ozimele onomnyango ozimele.
Ifakwe yonke into oyidingayo ukuze uchithe izinsuku ongenakulibaleka eDolobheni Lobuciko Namasiko angu-3!
I-Loft enhle enekhabethe lokuhamba elikhanyayo. Umhlobiso omusha nowesimanje, ofakwe konke ukunethezeka, izesekeli kanye nezinsizakalo ukuze ungantuli lutho nokuthi umthwalo wakho uyizingubo zakho ozithandayo kuphela!
Itholakala endaweni ethule nje imizuzu emi-2 ukusuka enkabeni kanye nezingu-5 ukusuka enkundleni yebhola lezinyawo e-Córdoba nasezinkundleni zezemidlalo uma inhloso yakho kuwukujabulela imikhosi yayo edumile kaMeyi (i-Córdoba Fair, i-Cross, imakethe yasendulo, nama-patio)
Ukuhlala emadolobheni kuthule kakhulu. Ukufinyelela okuqondile eTorre de la Calahorra nasePuente Romano okuzokuyisa edolobheni elidala, iMosque kanye nekota yamaJuda imizuzu emi-3 nje yokuhamba!
Nginikeza izivakashi zami ukuzimela, kodwa ngiyatholakala uma zingidinga. Ngihlala eduzane futhi ngitholakala kuwe ngokushesha nganoma yimiphi imibuzo, imibuzo noma izidingo eziphuthumayo ezidingwa izivakashi zami!
UManu Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: CTC-2019072673